traveltips မော်ကွန်းတိုက် | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: traveltips
နေအိမ် > traveltips
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ရှေးခေတ် အချစ်မြို့များ, ချစ်စရာကောင်းသောဥယျာဉ်များ, လှပသောရင်ပြင်များ, ဥရောပသို့ နေ့စဉ် သန်းနှင့်ချီသော ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်သည်။. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ခရီးသွားများသည် ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းနှင့် ကျက်သရေရှိမှုကို စူးစမ်းရန် ဥရောပသို့လာရောက်ကြပြီး နာမည်ကြီးဥရောပအထင်ကရနေရာများတွင် စမတ်ကျသောလှည့်ကွက်များဖြင့် ခါးပိုက်နှိုက်ခံရသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။. Stay safe during your…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သင်မကြာမီဥရောပသမဂ္ဂသို့လာရန်စီစဉ်နေသည်ဆိုပါစို့. ထိုကိစ္စတွင်, သင်၏အတွေ့အကြုံကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းအောင်အထောက်အကူပြုမည့်အကြံဥာဏ်များနှင့်အရေးကြီးသောခရီးသွားလာရေးသတင်းအချက်အလက်များစွာရှိပါသည်. တကယ့်ကြီးမားတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ခရီးသွားခြင်းသည်သင်ဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ကြွယ်ဝချမ်းသာရန်သင်ဝယ်ယူသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှန်ကန်စွာယုံကြည်သည်! ထို့အပြင်စည်းစိမ်ကြွယ်ဝရန်အတွက်သင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောငွေများနှင့်ခွဲခွာရန်မလိုအပ်ပါ. နေရောင်နမ်းထွက်စွဖို့စီစဉ်နေစဉ်…